UN: "Qorshe lagu xadayey Hantida Somalia" Warbixin
QM u qaabislan inaan lagu xadgudbin cunaqabateynta saaran Somalia ayaa ku eedeeysay Madaxweynaha dowlada Federaalka Somalia, Wasiir hore oo ka tirsanaa xukuumadiisa iyo shirkad kuwa sharciga ka shaqeeya oo laga leeyahay dalka Mareykanka iney xadaan ama weeciyaan hantida Somalia ee taala wadanka dibadiisa.
Eegayaasha cunaqabateynta saaran wadamada Somalia iyo Eritrea oo ka kooban 8 qof ayaa warbixintaan oo 37 Bogg ah waxaa ay u soo bandhigeen golaha amaanka maalmihii la soo dhaafey.
Kooxda ilaalinta QM ayaa sheegtey in xogta ay ururiyeen cadeyneyso sida loo rabey in si khaldan loogu weeciyo ama loo xado hantida dalka ee taal wadanka dibadiisa iyadoo la adeegsanayo awood dowladeed.
Hantida qaranka Somalia oo isugu jirta Dahab, lacag iyo hanti ma guurta ah ayaa lagu xayirey bangiyada caalamka 1991 kadib markii dagaal sokeeye oo lagu hoobtey ka dhacey wadanka Somalia.
Kooxda QM ee ilaalinta cunaqabateynta saaran Somalia ayaa warbixntooda ku sheegey in khayamadaan la rabey in lagu xado hantida wadanka ay wada qorsheynayeen Madaxweynaha Somalia iyo xafiiskiisa, Wasiirkiisa hore ee arrimaha dibada Fawzia Yusuf H. Adam, shirkad ka shaqeysa sharciga oo la yiraahdo Shulman Rogers iyo labo qof oo xiriirinayey shirkadaan iyo dowladda Somalia.
Warbixintaan waxey dhabar-jab ku tahay beesha caalamka dadaalka ay ugu jirto sidii dowladda uu Madaxweynaha ka yahay Xasan Shiikh u siin laheyd lacago dib loogu dhiso dalka Somalia.
Dhamaan dadka lagu magacaabey warbixintaan ayaa beeniyey iney qorsheynayeen iney weeciyaan hantida wadanka ee taal dalka dibadiisa, iyadoo Wasiiradii hore ee arrimaha dibada Somalia oo iminka ah xildhiban ka tirsan Barlamanka horey u sheegtey ineysan marnaba cadaadis ku saarin gudoomiyihii hore ee Bangiga dhexe Somalia Yusur Abraar iney khayaamo la gasho.
Madaxweynaha dowladda Federaalka Somalia iyo xafiiskiisa ayaa saxaafada u sheegey ineysa ka hadleyn warbixintaan madaama aan weli la shaacin.
Shulman Rogers ayaa dhinaca kale aad u beenisay warbixintaan iyadoo sheegtey in raadinta Hanatida Somalia ee taal wadanka dibadiisa aheyd mid wanaag u soo jiideysay shacabka waxeyna cambaareyn xoogan dusha uga tuureen madaxa kooxdaan Chopra iyagoo xusey inuusan gabi ahaanba tagin gudaha dalka markii kooxdiisa qoreysay qoraalkaan.
Chopra ayaa sidoo kale dhinaciisa difaacey warbixinta koxdiisa islamarkaana sheegey inuusan hadal intaas ka badan ka oraneyn eedeeynta Rogers.
Warbixintaan ayaa daba-gashey qaar ka tirsan qodobadii ugu muhiimsanaa oo Yussur Abarar shaqada uga tagtey kadib markii cadaadis lagu saarey iney saxiixdo heshiiska shirkada iyo dowlada Somalia kaasoo uu ku jirey qodob dhigaya in Rogers leedaahay 5% abaalmarin ah markii hantida Somalia ee dibadda taal la soo xereeyo iyo 6% kharaashaad aan la sheegein.
Yusur Abraar oo wel-wel ka muujisay 6% kharashaad aan la sheegein ayaa markii dambe ogaatey iney tahay lacag loo haynayo iney qaybsadaan wasiiradii hore ee arrimaha dibada Fowzia Adam, Musa Haji Mohamed Ganjab iyo Abdiaziz Hassan Giyaajo Amalo bey warbixintaan sheegtey.
Warbixinta kooxdaan kor-jogayasha QM ayaa xustey in Yussur Abraar 6% kharashkaan kala hadashey Madaxweynaha dowladda Federaalka Somalia Sept,2013.
" Madaxweynaha ayaa u sheegey Yussur in Fowzia, Ganjab iyo Amalo istaahilaan in lacagtaan 6% qataan madaama ay aad uga shaqeeyaan howshaan" ayey xustey warbixintaan.
" Abraar waxa ay ka codsatey Madaxweynaha inuu dib u eego arintaan balse waxaa uu ugu jawaabey iney dib u akhrido heshiiskaan" sidaas waxaa lagu xusey warbixinta QM.
Abaraar marna ma saxiixin heshiiskaan iyada oo sidoo kale ku-xigeenka wasiirka malaiyada dhinaca kale ku cadaadiyey in Account-ka furto wadanka Imaaraadka Carabta taasoo qorshaheedu ahaa in lagu soo shubo lacagahaan balse waxey shaqada ka tagtey iyada oo aan furin.
GAROWE ONLINE+ WAKAALADAHA
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa sheegtay in Dowladda Federaalka Somalia ay iska...